ပြည်ပတံတိုင်းအတွက် အလှဆင်ထားသော ပန်နယ်လ်အမျိုးအစားများ-Jinan Zhengtang Insulation Insulation Insulation ပစ္စည်း Co.Ltd
ပြည်ပတံတိုင်းအတွက် အလှဆင်ထားသော ပန်နယ်လ်အမျိုးအစားများ
ထွက်မြောက်ရာတံတိုင်းအတွက် အလှဆင်ရေးအဖွဲ့အမျိုးအစားများမှာ -
1.1.dorative Panel(1.1.dorative Panel. အလှဆင်ရေး အဖွဲ့ သည် လက်ရှိ တွင် ရောစပ် ထား သော ရေနံ နည်းလမ်း နှင့် ကွဲပြား သော အဆင့်မြင့် အဆင်တန်ဆာ အမျိုးအစား တစ် ခု ဖြစ် သည် ။ ၎င်း သည် ၀.၂ မီလီမီတာ ခန့် ထူ သော မိုက်ခရို-တင် သစ်သား အရေပြား အမျိုးအစား တစ် မျိုး ဖြစ် ပြီး ၊ ခိုင်ခံ့ သော သစ်သား မှ တိကျ စွာ စီစဉ် ထား ပြီး ၊ အခြေခံ ပစ္စည်း အဖြစ် တိကျ စွာ စီစဉ် ထား ပြီး ၊ အလှဆင် သော အကျိုး သက်ရောက် မှု တစ် ခု တည်း ဖြင့် အလှဆင် ထား သော ပန်းကန်ပြား တစ် ခု ဖြစ် သည် ။ သူဟာ အထူးနည်းနဲ့ တည်ရှိနေတဲ့ အပိုင်းတစ်ပိုင်းပါ။
"Big Core Bard" လို့ လူသိများတဲ့ လိုင်း ၂.ဘလော့ဘုတ်။ ဗဟို ပန်းကန်ပြား ဈေးနှုန်း ပါးပါး ထက် ကြီးမား သော ဗဟို ပန်းကန် ဈေးနှုန်း ဈေးနှုန်း သည် ဈေးပေါ သည် ၊ ၎င်း ၏ လျင်မြန် သော (အဓိက ဦးတည် ချက် ကို ခွဲခြား သိမြင် ရန်) ဖိသိပ် အားနည်း သည် ။ အဓိကဘုတ်ပြားကြီးကို အလယ်မှာ အတူတကွ ဖိနှိပ်ထားတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်နှစ်ခုနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
၃.Solid Board. ဘုတ်အဖွဲ့၏ ရုပ်ဝတ္ထုအမည်အရ ခိုင်ခံ့သောဝုဒ်ဘုတ်အဖွဲ့ကို အများအားဖြင့် အမျိုးအစားခွဲထားသော်လည်း ထိုကဲ့သို့သော ဘုတ်အဖွဲ့၏ ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားမှုနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး နည်းပညာ လိုအပ်ချက်များကြောင့် အဆင်တန်ဆာသုံးစွဲမှုမှာ သိပ်မများပါ။ ခိုင်ခံ့သောသစ်သားကို သစ်သားပျဉ်ပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤပျဉ်ပင်သည် ခိုင်ခံ့ပြီး ကြာကြာ၊ စပါးသဘာဝဖြစ်သည်။ ယင်းသည် အလှဆင်ရာတွင် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
4.Plywood ဟုလည်း လူသိများသည့် "Thin အဓိကဘုတ်ပြား" ဟု လူသိများသော မျဉ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ လက်လုပ်ပရိဘောဂများအတွက် အသုံးပြုလေ့အများဆုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ SPLINTS သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ၃ စင်တီမီ ပန်းကန်ပြား၊ ၅ စင်တီမီတာပြား၊ ၉ စင်တီမီ ပန်းကန်ပြား၊ ၁၂ စင်တီမီတာပြား၊ ၁၈ စင်တီမီတာ သတ်မှတ်ချက် ၆ စင်တီမီတာ (1cm 1m 1m) အဖြစ် ခွဲထားသည်။
"အပူထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အလှဆင်ခြင်း၊ စွမ်းအင်စုဆောင်းခြင်း" သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ ကာကွယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။